TikTok waa meesha ugu horaysa ee loogu talagalay fiidiyowga gaaban ee moobiilka, oo bixiya waxyaabo xiiso leh, iska caadi ah, oo dhab ah. Shaki yar baa ku jira koritaankiisa:
Xayeysiin Video - iyadoo kuxiran meesha aad jeceshahay inaad dhigto, saamiyada dhinacyada 9: 16, 1: 1, ama 16: 9 waxaa loo isticmaali karaa fiidiyowyo 5 ilbidhiqsi ilaa 60 ilbiriqsi dheer ah .mp4, .mov, .mpeg, .3gp , ama .avi qaab.
Maaddaama ay tahay dukaanka dahabka ee madaxbannaan, Slate & Tell waxay raadinayeen inay dhisaan wacyigelin iyo tixgelin inta lagu jiro xilliyada iibka ugu sarreeya. Iyagoo ka faa'iideysanaya TikTok Ganacsi qalab fudud oo loo adeegsado Smart Video Hal abuurnimo iyo u ololeynta munaasabadaha munaasabadaha, waxay abuureen madadaalo iyo soo jiidasho hal abuur leh oo gaarey 4M TikTok isticmaaleyaasha waxayna keeneen 1,000 kalfadhi keliya. ku dar gaadhiga beddelaad, ka caawinta iyaga inay gaaraan himiladooda ah 2X celinta-ad-ku-bixinta muddo 6 bilood gudahood ah.